Tiirka Diinta Shumaca cad - Shiinaha Litbright Shumaca (shijiazhuang)
Info aasaasiga ah Model No .: Nooca G25-0830H: Waxyaabaha tapered: Parafuun Wax Isticmaalka: Aaska, Holiday, HBS, Diinta, Wedding, xisbiga, Dhalashada, Laydhka Home, Qurxinta Function: Laydhka Color: dhadhan White: Size carfiso laheyn: 7 * 10cm gubasho Time: 8 saacadood Processing: Qaab Long Gubidda Time: Khaanadaha kala duwan baakadaha Info dheeraad ah Baako: saarida baakadaha box: 30 metrik Brand: Litbright Gaadiidka: Ocean, Land, Air Place of Origin: Shiinaha Supply Kartida: fcl 3 × 20 'halkii Certificate maalin : BS ...
Qaabeeyaan No .: G25-0830H
Long Gubidda Time: Khaanadaha kala duwan Baakadaha
Baako: Baakadaha sanduuqa
Wax soo saarka: 30 metrik
Supply Kartida: fcl 3 × 20 'maalin kasta
shumacyo Bright yihiin wax paraffine, waxa color waa caddaan, dabcan waxa kale oo aad dooran kartaa midabyo kale. Waxaan mar walba samayn 8 gabal per sanduuqa 30 sanduuqyada per ctn, ama 50 sanduuqyada per xirxirida ctn. Your brand u gaar ah waa la aqbali karo. shumac waxaa loo isticmaalaa markii casho, nuurka qurxin qolkaaga aad jaceyl oo aad naftaada ku nasato doonaa inta lagu guda jiro waqti qado aad, laambadda jiro urta ama qiiqa lahayn.
Nooca: shumac dhalaalaya
Isticmaalka: Hawlaha Diinta
Iyo meesha Asal ahaan, wuxuuna bei, Shiinaha (Dhul)
6pcsx60box, 8pcs x 30boxes / ctn iyo sidoo kale sida ay macaamiisha u baahan.
Production Capacity: 4x20ft / maalintii
aan haysan waqti bixinta si dhakhso ah,
oo tayo leh oo qiimo macquul ah.
shumac qoyska, flameless hago keentay shumac, shumac koombada, shumac dhalaalaya, shumac tealight, shumac tiir, shumac hadiyad, shumac, shumac Yuhuudda, shumac kubada, shumac gabogabaysmo, shumac hordhigaya.
Previous: dubaalad suuf iyo paraffine shumac wax
Next: shumacyo White ka 10g in 100g
Midab shumac qoyska samaynta sahay